Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịtụ egwu » Disney Cruise Line machibido ụmụaka na-enweghị ọgwụ mgbochi
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • Ịtụ egwu • culinary • omenala • Entertainment • fim • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ okomoko • Music • News • ndị mmadụ • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Disney Cruise Line machibido ụmụaka na-enweghị ọgwụ mgbochi.
Iwu ọhụrụ a ga-abụ ihe achọrọ maka ma ndị njem US na mba ofesi, na-egbochi ụmụaka site na mba ndị na-anaghị agba ụmụaka ọgwụ mgbochi.
Disney kwuputara chọrọ ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 nke njem emelitere taa.
Iwu ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 nke New Disney Cruise Line ga-amalite na Jenụwarị 13, 2022.
Ndị mmadụ na-erughị eru maka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa n'ihi afọ ndụ ga-enyerịrị akaebe nke nsonaazụ COVID-19 na-adịghị mma emere n'etiti ụbọchị 3 na awa 24 tupu ụbọchị ịkwọ ụgbọ mmiri ha.
Disney Cruise Line kwuputara ihe ọhụrụ ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 yana mgbasawanye nke ikike ịgba ọgwụ mgbochi ya taa.
N'izo aka ntuziaka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa US, gbasaara nso nso a ka ọ gụnyere ụmụaka dị afọ ise, Disneygbọ Mmiri Disney kwuru na ụmụaka ndị dị afọ ise ga-achọ ịgba ọgwụ mgbochi megide nje COVID-19 iji nwee ike ịbanye n'ụgbọ mmiri ya.
Disney, ahịrị ụgbọ mmiri mbụ chọrọ jabs maka ụmụaka, wee kwuo na ihe ọhụrụ a chọrọ ga-amalite na Jenụwarị 13, 2022.
"Ka anyị na-akwọ ụgbọ mmiri ọzọ, ahụike na nchekwa nke ndị ọbịa anyị, ndị otu nkedo na ndị otu Crew bụ ihe kacha mkpa," Disney kwuru na nkwupụta. "Ihe anyị lekwasịrị anya ka na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri anyị n'ụzọ ziri ezi nke na-aga n'ihu na-emepụta anwansi maka ndị niile nọ n'ụgbọ mmiri."
Ndị mmadụ na-erughị eru maka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa n'ihi afọ ndụ ga-eweta "ihe akaebe nke nsonaazụ COVID-19 na-adịghị mma emere n'etiti ụbọchị 3 na awa 24 tupu ụbọchị ụgbọ mmiri ha."
Disneygbọ Mmiri Disney dọrọ aka ná ntị na anabataghị ule antigen na ule ga-abụrịrị ule NAAT, ule PCR ngwa ngwa ma ọ bụ ule PCR dabere na lab.
The cruise line bụ nke mbụ nkewa nke Ụlọ ọrụ Disney chọrọ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa maka ndị ahịa. Ugbu a, ogige ntụrụndụ isiokwu Disney enweghị ihe ọ bụla chọrọ ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 maka ndị ọbịa. Agbanyeghị, ndị ọrụ US niile nọ n'ebe ndị ahụ ga-enwerịrị ọgwụ mgbochi ọrịa coronavirus.
Shipsgbọ mmiri na-aghọkarị ebe COVID-19 na-ekpo ọkụ n'ime ọnwa mbụ nke ọrịa na-efe efe nke coronavirus, ebe ndị njem na ndị ọrụ ụgbọ mmiri butere ọrịa ahụ n'ọtụtụ ebe n'okirikiri ụgbọ mmiri.
Ọrịa ọjọọ ahụ emetụtala ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri nke ukwuu, yana ọtụtụ ahịrị na-aga n'ihu n'ihi mmetụta COVID-19 na mmachi ndị amachibidoro njem n'ụwa niile.